Kirin 970 Processor ကို ၅ သိန်းကျော်ဖုန်းမှာ သုံးထားတဲ့ Huawei Nova3ကို လေ့လာကြည့်ခြင်း
18 Aug 2018 . 12:57 PM
Huawei ကနေ ယခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ Nova3နဲ့ Nova 3i ဆိုပြီး Mid Range ဖုန်းသစ် ၂ မျိုးကို မိတ်ဆက်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဖုန်းတွေထဲမှာမှ လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာ ငွေကျပ် ၅၅၉၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းချနေတဲ့ Nova3စမတ်ဖုန်းက ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေပါတယ်။
အခုလိုမျိုး Huawei Nova3စမတ်ဖုန်းက ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတဲ့အချက်ကတော့ Processor အနေနဲ့ လက်ရှိ Huawei Flagship ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Huawei P20 နဲ့ P20 Pro ဖုန်းတွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Kirin 970 Processor ကိုပဲ အသုံးပြုထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ Flagship Level Processor ကို Mid Range ဖုန်းမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ Huawei Nova3စမတ်ဖုန်းအကြောင်းကို Review ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Huawei Nova3စမတ်ဖုန်းကို လက်ထဲမှာ ကိုင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အရှေ့ရော အနောက်ရောပါ Glass Body ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့် တော်တော်လေးကို Premium ဆန်တဲ့ Feeling ကိုရရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Nova3မှာ 3i နဲ့ မတူတဲ့အချက်က ဖုန်းနောက်ကျောဘက်က ဘေးဘောင်တွေကို ပိုပြီး ခုံးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ပိုပြီး ကိုင်လို့ ကောင်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Huawei Nova3ရဲ့ Display ပိုင်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ 6.3″ Full HD+ Display ကို အသုံးပြုထားပြီးတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Notch လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Display ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း တော်တော်လေးကို ကောင်းမွန်တယ်လို့ ပြောလို့ရပြီးတော့ တကယ်လို့ ကိုယ်က Notch ကို မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း Notch ကို ဖျောက်ထားလို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Huawei Nova3ရဲ့ အဓိက အားသာချက်ကို ပြောပါဆိုရင်တော့ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Nova3ဖုန်းမှာ လက်ရှိ Huawei ရဲ့ အကောင်းဆုံး Processor တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Kirin 970 Processor ကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီးတော့ RAM အနေနဲ့လည်း 6GB ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ဂိမ်းတွေ၊ Multitasking ပိုင်းတွေအကုန်လုံးက တကယ်ကို Flagship ဖုန်းတစ်ခုလိုမျိုး ကောင်းမွန်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Heat လည်း ဂိမ်းအကြာကြီးဆော့ရင်တောင်မှ သိသိသာသာမတက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ Storage အနေနဲ့လည်း SIM2Slot ကနေ MicroSD Card တိုးလို့ရတဲ့အပြင် Internal Storage ကလည်း 128GB ပါတော့ Data တွေအများကြီးလည်း သိမ်းထားလို့ရမှာပါ။
ကင်မရာပိုင်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း တော်တော်လေးကို ကောင်းမွန်တဲ့အထဲမှာ ပါပြီးတော့ Back Camera ကို 24MP Monochrome Sensor နဲ့ 16MP RGB Sensor တွေကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Aperture ပိုင်းအနေနဲ့လည်း Lens ၂ ခုစလုံးက f1.8 Sensor ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် Low Light ဓါတ်ပုံတွေကိုလည်း ကောင်းကောင်းရိုက်ကူးနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
Huawei Nova3ရဲ့ ကင်မရာဟာ Monochrome Sensor ကိုပါ အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ပုံမှန် Aperture Mode ၊ Portrait Mode နဲ့ Pro Mode တွေအပြင် Monochrome ပုံတွေကိုပါ ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပုံထွက်ကလည်း တော်တော်ကိုကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Huawei ရဲ့ ကိုယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ ပုံရဲ့ အခြေအနေပေါ်မှုတည်ပြီးတော့ ကိုက်ညီတဲ့ AI enhancement တွေနဲ့ ဓါတ်ပုံကို ပိုပြီး လှပသွားအောင် ပြုလုပ်ပေးတဲ့ AI Camera Feature လည်းပါဝင်ဦးမှာပါ။
Front Selfie Camera အနေနဲ့ကတော့ 24MP f2.0 Aperture Camera ကို အသုံးပြုထားပြီး AR Lens Feature တွေ၊ Background Lighting Feature တွေကိုပါ အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက် Selfie ရိုက်ကူးရတာ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက်ကတော့ ပိုပြီး အဆင်ပြေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Battery ပိုင်းအနေနဲ့လည်း Heavy User တွေ အကြိုက်တွေ့မယ့် 3750mAh Battery ကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီးတော့ တကယ်လို့ ကိုယ်က တနေကုန်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တောင်မှ Battery က ညအထိကို အသုံးပြုနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ပုံမှန်ပဲ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Huawei Nova3စမတ်ဖုန်းက ၂ ရက်လောက်ကို အေးဆေးအသုံးပြုလို့ရမှာပါ။
အဲ့ဒီအတွက် Huawei Nova3စမတ်ဖုန်းဟာ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းနဲ့ ကင်မရာပိုင်းမှာ တော်တော်လေးကို ကောင်းမွန်တယ်လို့ ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပြီး တခြား Software ပိုင်းနဲ့ Battery ပိုင်းမှာလည်း အားနည်းတယ်လို့ ပြောလို့မရတဲ့ ဖုန်းတစ်ခုလို့ပဲ သတ်မှတ်ရမှာပါ။ လောလောဆယ်မှာ ၅ သိန်းဝန်းကျင်ဖုန်းကို ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ Huawei Nova3ဖုန်းဟာ Recommend ပေးနိုင်တဲ့ဖုန်းလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။
Huawei ကနေ ယခုနောကျဆုံးအနနေဲ့ Nova3နဲ့ Nova 3i ဆိုပွီး Mid Range ဖုနျးသဈ ၂ မြိုးကို မိတျဆကျထားခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီ ဖုနျးတှထေဲမှာမှ လကျရှိစြေးကှကျထဲမှာ ငှကေပျြ ၅၅၉၀၀၀ ကပျြနဲ့ ရောငျးခနြတေဲ့ Nova3စမတျဖုနျးက ပိုပွီး စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးနပေါတယျ။
အခုလိုမြိုး Huawei Nova3စမတျဖုနျးက ပိုပွီး စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးနတေဲ့အခကျြကတော့ Processor အနနေဲ့ လကျရှိ Huawei Flagship ဖုနျးတှဖွေဈတဲ့ Huawei P20 နဲ့ P20 Pro ဖုနျးတှမှော အသုံးပွုနတေဲ့ Kirin 970 Processor ကိုပဲ အသုံးပွုထားတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ စှမျးဆောငျရညျအလှနျကောငျးမှနျတဲ့ Flagship Level Processor ကို Mid Range ဖုနျးမှာ အသုံးပွုထားတဲ့ Huawei Nova3စမတျဖုနျးအကွောငျးကို Review ပွုလုပျပေးလိုကျပါတယျ။
Huawei Nova3စမတျဖုနျးကို လကျထဲမှာ ကိုငျကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ အရှရေ့ော အနောကျရောပါ Glass Body ကို အသုံးပွုထားတဲ့အတှကျကွောငျ့ တျောတျောလေးကို Premium ဆနျတဲ့ Feeling ကိုရရှိတာကို တှရေ့ပါတယျ။ Nova3မှာ 3i နဲ့ မတူတဲ့အခကျြက ဖုနျးနောကျကြောဘကျက ဘေးဘောငျတှကေို ပိုပွီး ခုံးပေးထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ ပိုပွီး ကိုငျလို့ ကောငျးနတောကို တှရေ့ပါတယျ။
Huawei Nova3ရဲ့ Display ပိုငျးကို ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ 6.3″ Full HD+ Display ကို အသုံးပွုထားပွီးတော့ လကျရှိအခြိနျမှာ ခတျေစားနတေဲ့ Notch လညျးပါဝငျမှာဖွဈပါတယျ။ Display ပိုငျးကိုကွညျ့မယျဆိုရငျလညျး တျောတျောလေးကို ကောငျးမှနျတယျလို့ ပွောလို့ရပွီးတော့ တကယျလို့ ကိုယျက Notch ကို မကွိုကျဘူးဆိုရငျလညျး Notch ကို ဖြောကျထားလို့ ရမှာဖွဈပါတယျ။
Huawei Nova3ရဲ့ အဓိက အားသာခကျြကို ပွောပါဆိုရငျတော့ စှမျးဆောငျရညျပိုငျးပဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။ Nova3ဖုနျးမှာ လကျရှိ Huawei ရဲ့ အကောငျးဆုံး Processor တဈခုဖွဈတဲ့ Kirin 970 Processor ကို အသုံးပွုထားတာဖွဈပွီးတော့ RAM အနနေဲ့လညျး 6GB ပါဝငျနတောဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ ဂိမျးတှေ၊ Multitasking ပိုငျးတှအေကုနျလုံးက တကယျကို Flagship ဖုနျးတဈခုလိုမြိုး ကောငျးမှနျနတောကိုတှရေ့မှာပါ။ Heat လညျး ဂိမျးအကွာကွီးဆော့ရငျတောငျမှ သိသိသာသာမတကျတာကို တှရေ့ပါတယျ။ Storage အနနေဲ့လညျး SIM2Slot ကနေ MicroSD Card တိုးလို့ရတဲ့အပွငျ Internal Storage ကလညျး 128GB ပါတော့ Data တှအေမြားကွီးလညျး သိမျးထားလို့ရမှာပါ။
ကငျမရာပိုငျးကို ကွညျ့မယျဆိုရငျလညျး တျောတျောလေးကို ကောငျးမှနျတဲ့အထဲမှာ ပါပွီးတော့ Back Camera ကို 24MP Monochrome Sensor နဲ့ 16MP RGB Sensor တှကေို အသုံးပွုထားတာဖွဈပါတယျ။ Aperture ပိုငျးအနနေဲ့လညျး Lens ၂ ခုစလုံးက f1.8 Sensor ကို အသုံးပွုထားတဲ့အတှကျ Low Light ဓါတျပုံတှကေိုလညျး ကောငျးကောငျးရိုကျကူးနိုငျတာကို တှရေ့ပါတယျ။
Huawei Nova3ရဲ့ ကငျမရာဟာ Monochrome Sensor ကိုပါ အသုံးပွုထားတဲ့အတှကျ ပုံမှနျ Aperture Mode ၊ Portrait Mode နဲ့ Pro Mode တှအေပွငျ Monochrome ပုံတှကေိုပါ ရိုကျကူးနိုငျမှာဖွဈပွီး ပုံထှကျကလညျး တျောတျောကိုကောငျးမှနျတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Huawei ရဲ့ ကိုယျရိုကျလိုကျတဲ့ ပုံရဲ့ အခွအေနပေျေါမှုတညျပွီးတော့ ကိုကျညီတဲ့ AI enhancement တှနေဲ့ ဓါတျပုံကို ပိုပွီး လှပသှားအောငျ ပွုလုပျပေးတဲ့ AI Camera Feature လညျးပါဝငျဦးမှာပါ။
Front Selfie Camera အနနေဲ့ကတော့ 24MP f2.0 Aperture Camera ကို အသုံးပွုထားပွီး AR Lens Feature တှေ၊ Background Lighting Feature တှကေိုပါ အသုံးပွုနိုငျတဲ့အတှကျ Selfie ရိုကျကူးရတာ ကွိုကျနှဈသကျသူတှအေတှကျကတော့ ပိုပွီး အဆငျပွတောကို တှရေ့ပါတယျ။
Battery ပိုငျးအနနေဲ့လညျး Heavy User တှေ အကွိုကျတှမေ့ယျ့ 3750mAh Battery ကို ထညျ့သှငျးပေးထားပွီးတော့ တကယျလို့ ကိုယျက တနကေုနျအသုံးပွုမယျဆိုရငျတောငျမှ Battery က ညအထိကို အသုံးပွုနိုငျတာကို တှရေ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ ပုံမှနျပဲ အသုံးပွုမယျဆိုရငျ Huawei Nova3စမတျဖုနျးက ၂ ရကျလောကျကို အေးဆေးအသုံးပွုလို့ရမှာပါ။
အဲ့ဒီအတှကျ Huawei Nova3စမတျဖုနျးဟာ စှမျးဆောငျရညျပိုငျးနဲ့ ကငျမရာပိုငျးမှာ တျောတျောလေးကို ကောငျးမှနျတယျလို့ ပွောလို့ရမှာဖွဈပွီး တခွား Software ပိုငျးနဲ့ Battery ပိုငျးမှာလညျး အားနညျးတယျလို့ ပွောလို့မရတဲ့ ဖုနျးတဈခုလို့ပဲ သတျမှတျရမှာပါ။ လောလောဆယျမှာ ၅ သိနျးဝနျးကငျြဖုနျးကို ရှာနတေယျဆိုရငျတော့ Huawei Nova3ဖုနျးဟာ Recommend ပေးနိုငျတဲ့ဖုနျးလို့တောငျပွောလို့ရပါတယျ။
by Zawyè . 22 hours ago